Warqaddii uu ABRAHAM LINCOLN u qoray barihii wiilkiisa! | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Warqaddii uu ABRAHAM LINCOLN u qoray barihii wiilkiisa!
Warqaddii uu ABRAHAM LINCOLN u qoray barihii wiilkiisa!
(Hadalsame) 25 Sebt 2019 – Wiilkaygu maanta wuxu bilaabayaa dugsiga. Wax waliba waxay ku noqon doonaan ugub iyo yaab in muddo ah, waxaanan rajaynayaa in aad si habboon u la dhaqmi doontid. Waana jid dheer oo tacab badan oo uu kaga gudbayo qaarado kala fog. Geeddi kastana waxa lagala kulmaa dagaal, masiibo iyo murugo intaba. Sidii looga gudbi lahaana waxay u baahan tahay iimmaan, jacayl, dhiirani iyo geesinimo.
Sidaa daraadeed, Macallin, fadlan si tartiib ah gacantiisa u qabo oo bar wax kasta oo ay tahay inuu oggaado haddii aad awooddid. Bar in caddow kasta uu jiro saaxiib. Waa inuu oggaadaa in rag oo dhami aanay rag wada ahayn. Iyana bar in fule iyo geesiba jiraan, sidoo kale ay jiraan Siyaasi qallafsan iyo hoggaamiye naf hur le.
Bar haddii aad awooddo, in senti lacag ah oo aad kasbataa uu ka qiimo badan yahay doollar aanad tabcin. Macallin bar in imtixaanka dugsiga oo uu dhacaa ay ka sharaf badan tahay inu qisho ama khiyaano ku gudbo. Waxa aad bartaa inuu waji furan ku waajaho guul-darrada, isla markaana ku farxo marka uu guulaysto.
Bar inuu dadka u debecsanaado, una fiicnaado dadka wanaagsan. Ka fogee xaasidnimada haddii aad awooddo, bar sirta ku duuggan in uu qunyar qoslo. Bar haddii aad awooddo in uu qoslo marka uu murugeysan yahay iyo in aanay ilmadu ceeb ahayn. Bar guul-daradu in ay libin leedahay, guushuna wadato niyad-jab.
Bar haddii aad kartid mucjisooyinka buugta, laakiin waqti sii uu kaga fekero qarsoodiga fog ee shimbiraha samada duula, la yaabka shinnida qorraxda beegsata iyo ubaxa ku yaala buuraha cagaaran. Bar inuu aamino fikirkiisa, xitaa haddii qof kastaa uu u sheego inuu khaldan yahay.
Isku day in aad wiilkayga barto inuu ku adkaado go’aankiisa marka dadka oo dhami ay noqdaan hugun-raac. Bar qof kasta inu dhegaysto, laakiin sidoo kale bar inuu kala saaro waxa uu maqlo, kana qaato inta runta ah ee wanaaggsan oo kaliya.
Bar inuu ku iibiyo hibadiisa iyo maskaxdiisa qiimaha ugu sarreeya, laakiin marnaba aanu siisanin qiime kasta damiirkiisa. U daa in aanu dulqaad u yeelanin dhiiranida ee uu dulqaad u yeesho geesinimada.
Bar inuu rumeeyo ILAAHAY oo uu yeesho iimaan uu aaminsanyahay oo uu aadamaha oo dhan kula dhaqmo wanaag.
Tani waa amarkayga macallin laakiin qabo waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid. Waa wiil yar oo wanaagsan, waana wiilkayga.
W.T: Mukhtaar Cabdi Qule
Previous articleDAAWO: Madaxwaynayaasha Somalia & Kenya oo heshiis rasmi ah gaarey (Arag qodobbada & farxadda ka muuqata Kenyatta)
Next articleMadaama la sheegay inay Somalia FEDERAAL tahay waa in laga hirgeliyaa SHARCIGAN! (Akhri)